caafimaad Archives - iftineducation.com
Cagaarshow, ama maqaarka iyo indhaha oo huruud u ekaada, waa xaalad ku badan ilmaha yar yar ee dhashay ee naaska nuugaya. Dhab ahaantii, ilaa 60% oo dhalaan yar yar ah ayuu ku dhacaa cagaarshowgu dhalashadooda maalmo yar kadib. Xaaladan waxay dhici kartaa marka ilmaha dhiigooda uu ku jiro xaddi ama tiro badan oo ah dheecaanka loo yaqaan Bilirubin. Dheecaanka Bilirubin…
faaidooyinka Caafimaadka u leeyahay Babaayga waxaa ka mid ah, Hadaa rabtid in aad Qurxiso Jirkaaga aaad ayuu ugu fiicanyahay Jirka wuu qurxiyaa, Dhibaatooyinka ku dhaca dheefshiidka ayuu aad ugu fiicanyahay, ka hortaga Cudurada ku dhaca Indha iyo Wadnaha ayuu aad ugu ficanyaha sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa Cuduro farabadan oo ku soo wajilahaa sida Kansarka waxaa kaloo lagu Tiriyaa…
Cuntada qofka qaato ayay waxa ay ka mid tahay wax yaalaha lagu daaweeya heerka sokorta shakhsiga. Heerka cudurka sokorta ayay waxa ay ku xiran tahay nooca cuntada aad cuntid. Markastaa waa in aad cabiraad heerka sokorta dhiiga waa in aad samaysid ka hor inta aadan quraacan iyo ka hor inta aadan seexan. Waayo waxa ay kugu kaalmaynaysaa cuntooyinka aad u…